Shiinaha API610 ANSI Nidaamka Kiimikada Halbeegga Petrochemical Ceyriin Ceyriin Saliid Soo Saarista Soosaarida Saliida iyo soosaarayaasha | Tongke
API610 ANSI Habka Kiimikada Halbeegga Shidaalka Shidaalka Ceyriin ee Shidaalka Petrochemical
Qaabka Maya ： ZA
Bamka soosaarida taxanaha ZA waa mid jiif ah, marxalad heeso ah, naqshad dib-u-soo-celin, waxay la kulmayaan nooca 10-aad ee ANSI / API610-2004.
U wareejinta nadiif ah oo yar oo wasakhaysan, heerkul hoose iyo mid sare, kiimiko dhexdhexaad ah iyo dareere wax duminaysa.
ZAO taxanaha ahi waxay la socdaan sanduuqa kala baxa ee radial split, iyo noocyada OH1 ee API610 bambooyin, ZAE iyo ZAF waa noocyada OH2 ee bambooyin API610 Shahaadada guud guud Haydarooliga iyo saa'idka waa isku mid sida ZA taxane ZAE ah; Impeller waa nooc furan ama nus-furan ah, oo la jaan qaada saxanka hore iyo gadaalba saxan u adkaysta.
Lagu dabaqi karo wareejinta cabitaanno kala duwan oo leh dhago adag, dhagxaan isku dhejisan, dareeraha dareeraha ah iwm.
Mashiinka leh gacmo-gacmeed, gebi ahaanba ku go'doonsan dareeraha, iska ilaali qashin-qubka, wuxuu hagaajiyaa cimriga bamka mashiinka. Mootada waxay la socotaa isku xirnaanta diaphragm-ka oo dheereeya, dayactir fudud oo caqli badan, iyada oo aan la qaadin tubooyinka iyo matoorka
Ugu badnaan loo isticmaalo:
Sifeynta, warshadaha batroolka-kiimikada, ka shaqeynta dhuxusha iyo injineernimada heerkulka hoose
Warshadaha kiimikada, sameynta waraaqaha, saxarka, sonkorta iyo sida warshadaha wax soo saarka caadiga ah
Nidaamka caawinta ee xarunta korantada
Injineernimada ilaalinta deegaanka
Maraakiibta iyo injineernimada badda
Hore: MS Cadaadiska Sare ee balaaran biyo nadiif ah bamka lugaha gaaska
Xiga: Mashiinka Diesel Mashiinka dhaadheer ee Mashiinka Dabka
Noocani waa API610 OH1, nooca bambooyin ee OH2 iyadoo loo eegayo cadaadiska.
Dhexroor DN 32-400mm
Awood illaa 2600 m3 / saacaddii
Madaxa ilaa 300m
Heerkulka dareeraha ah -80 ~ 170 .C
Cadaadiska shaqada ~ 2.5 MPa (Faahfaahinta waxaa loola jeedaa sawirka PT, iyadoo loo eegayo heerkulka kala duwan si loo xusho qalabka saxda ah)
U wareejinta nadiif ah oo yar oo wasakhaysan, heerkul hoose iyo mid sare, kiimiko dhexdhexaad ah iyo dareere wax duminaysa. Sifeeyaha, warshadaha shidaalka-kiimikada, ka shaqeynta dhuxusha iyo injineernimada heerkulka hoose.
Warshadaha kiimikada, sameynta waraaqaha, saxarka, sonkorta iyo sida warshadaha wax soo saarka caadiga ah;
Warshad biyaha siisa iyo macaanaynta biyaha badda;
Nidaaminta kuleylka iyo hawo-qaboojinta;
Nidaamka caawinta ee xarunta korantada;
Injineernimada ilaalinta deegaanka;
Maraakiibta iyo injineernimada badda.
CZ Horizontal Single Stage End Nuugista Centrifu ...